Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Kufsigii Ridwaan soomaalidu way ka gadooday, kii Gabdhaha Ogadeniyana way ka gaabsadeen! By: Xaaji M/rashiid.
Faallo: Kufsigii Ridwaan soomaalidu way ka gadooday, kii Gabdhaha Ogadeniyana way ka gaabsadeen! By: Xaaji M/rashiid.
Posted by Daljir	/ February 10, 2017
Hordhac: Marka hore waxaan amaanayaa dhaqanka suuban ee umadda soomaaliyeed ee ku salaysan Islaamka, kaasoo ahaa inay aad u qiimeeyaan guud ahaan dumarka gaar ahaana kuwa da’ yarta ah een wali reer yeelanin. Wuxuu dhaqanku ahaa in labada nin ee ay dhex marto saaxiibtinimo wanaagsan ay isa siiyaan Gabadh, sidoo kale haday labo Reer ka dhex dhacdo colaad loo maaro waayay waxay is dhaafsan jireen gabdho, taasoo noqon jirtay waasamo oo u baryay labadii Qabiil.
Waxaa intaa dheeraa in ninkii Gabadh faraha lagala ama aflagaadeeya laga qaado Xaalmarin. Waxaa sidoo kale jirtay in markay qoyska Gabadhi u dhalato ay niyada iska sii gashadaan inay usoo guuxayso Hanti Mood iyo Noolba leh, Dhiisha Faqrigana ay jabin doonaan! Yaana ilaawine Guriga Gabdhuhu ku badan yihiin wuxuu ahaa mid ay ka jirto kala dambayn, deganaan, Arsaaqad bisil, Nadaafad iyo waxtar bulshadu kawada faa’iidaysato.
Haadaan intaa ku dhaafo hordhaca- shacabka Qaaliga ah ee soonaalida ogadenya oo ah meesha ay soomaalidu kasoo qaadato Geesinimada iyo Sharafta waxaa lasoo darsay Guumayste kii ugu xumaa oon isagu gaar ahaantiisa lahayn tabar uu isku hortaagi karo Rabitaanka shacabkaas. Balse waxaa iska cad oo la hubaa inay Garabka ku hayaan dawlado ay ka dhaadhiciyeen Been magoogan iyo Quraafaad. Kadib markay bulshadaasi la gashay guumaystaha Dagaal Taariikhi ah isla markaana uu ku hongoobay Riyo maalmeedkii ayuu u jeedsaday inuu dadka maxasta ah ka aargoosto. Waxay noqotay inuu ku dhaqaaqo anshaxumi iyo inuu boobo dumarka jidhkooda isagoo ku fasaxay Daroogaystayaal wajiyo Madmadow.
Markay sidaa wax u dhaceen waxay bilaabeen dumarkii somalida ogadenya qaar badan oo kamid ahi inay u firxadaan dhanka Dalalka Dariska ah, Sida Kenya, Somaliya,Yamen, jabuuti iyo Eritreriya. Waxaa xusid mudan inay ku jiraan xeryaha ay Hay’aduhu maamulaan ee ku yaala dalalkaas. Waxaa kale oo jirta inay dumarka dhaawacani siwayn ugu jiraan Aaladda YouTubka iyagoo wada sharraxaya waqtiga iyo goobta la faroxumeeyay, Boogihiina saxaafadda tusaya!.
Waxaa kamid ah Dumarkaas Waayeel, mid Xaas ah iyo Gabdho uguba intaba. Falkii lala beegsaday gabadhii Ridwaan Bil kahor oo isagu ahaa Taariikh mugdi ah waxaa ka gadooday soomaalida qeybaheeda kala duwan sida Siyaasiyiinta, Gadhcasta, iyo Wadaadada. Kuwii falka gaystay waxaa la mariyay Ciqaab isugu jirta noocyo kala duwan. Dabcan meesha kama madhna in Gabadhiina la xaal mariyay.
Markaan isku dayo inaan kusoo dhawaado dulucda dhabta ah ee qoraalkani xamabaarsanyahay Waxaan u socdaa dadkii kahadlay xaalka Ridhwaan qeybtooda sheegata wadaadnimada oo kutubtii lakala baxay iyagoo sharxaya ciqaabta diinta islaamku ka qabto in lamariyo kuwiii falka ku fuliyay Ridwaan iyo waxa la midka ah.
Waxaan waydiinayaa Su’aashii abid ugu cuslayd ee la waydiiyo wadaado soomaaliyeed taasoo ah- Culimooy hadaynu isku raacsanahay inuu falkaasi ahaa kii udambeeyay ee lagula kaco gabadh soomaaliyeed, Maxaa idin hortaagnaa awal hore markii gabdhaha soomaalida Ogadenya la kufsanayay? Ma kutubtaa Roob idinka helay oo qalalkoodaad sugayseen!! Mise Sanduuq bay idinkaga jireen oo Furihiibaa idinka lumay!!
Si kastaba ha ahatee waxaan odhan leeyahay abshir dhaha Dumarka soomaalid Ogadeniyow Kuwii idin bahdilay waxaan Rajo buuxda ka qabaa in maalin aan fogeyn la idiinka aargudi doono. Waxaa idinka xigta inaad magacyadooda u gudbisaan laamaha bulshada ee ay Qusayso masaladaasi. Haday dhacdo in haweenta ay arintaasi ku dhacday tii Rabi u timaado, lama ilaawi doono ee dardaaran adag haka tagto!
Guntii iyo Gabagabadii waxaan aad uga xumahay Fal kasta oo gurracan oo lagula kaco Dumarka shanta soomaaliyeed meel kasta ha joogeene.